Read more about ကျွန်တော်တို့ အိမ်မက်ဆိုးတွေ ထပ်မမက်ချင်တော့ပေ
Read more about Northern Shan State Media Still Losing Access to Information and Being Threatened
Read more about သတင်းရယူပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးဆဲနှင့် ခြိမ်းခြောက်ခံရဆဲ ရှမ်း/မြောက် သတင်းမီဒီယာများ
Read more about တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲကြားက မြေစာပင်များ
Read more about လက်နက်ကိုင်ပေါင်းစုံ၏ အခွန်ကြောင့် ဆင်းရဲတွင်းသို့ နစ်သထက်နစ်လာသည့်ရွာ
Read more about မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေး ဆက်မလုပ်ဖို့၊ ရိုးရာအဝတ်စား မဝတ်ဆင်ဖို့နဲ့ အမျိုးသားအလံ မသုံးစွဲဖို့ တအာင်းကျေးရွာတွေမှာ မိုင်းဟပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့က ထပ်မံသတိပေး
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ရွေးကောက်ပွဲကနေ ပြည်သူတွေ ဘာမျှော်လင့်နေကြလဲ…?
Mai A Naing Mon, 11/16/2020 - 09:46
အကြိတ်အနယ် ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ယူဆရသည့် တအာင်း(ပလောင်) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ နမ့်ဆန်မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် တအာင်းအမျိုးသား ပါတီ(TNP)ကသာ လွှတ်တော်နေရာအားလုံးကို ထပ်မံအနိုင်ရရှိခဲ့ပြန်သည်။
နမ့်ဆန်တွင် TNP ပါတီအပြင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP)နှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလတို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် TNP နှင့် NLD ကသာ အပြိုင်အဆိုင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်နယ်အမှတ်(၁)နေရာတွင် ဖြစ်သည်။
Read more about ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ရွေးကောက်ပွဲကနေ ပြည်သူတွေ ဘာမျှော်လင့်နေကြလဲ…?
Read more about နယ်စပ်ဒေသရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အိမ်မက်